I-Conductor: Ipulatifomu Yokumaketha Engokwemvelo Yesitaki Sakho Se-MarTech | Martech Zone
I-Conductor: Ipulatifomu Yokumaketha Engokwemvelo Yesitaki Sakho Se-MarTech
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 18, i-2020 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 18, i-2020 AJ Kieffer
Sisesikhathini semininingwane egcwele ngokweqile. Ngokusakazwa kwedatha kwanamuhla, ngisho nomthengisi wedijithali ongcono kakhulu angazizwa ekhungathekile. Awudingi impendulo kuyo yonke imibuzo - udinga nje ukhiye wokuvula inani emikhankasweni nasezinhlelweni zakho. Udinga insizakalo eyenziwe ngezifiso, efinyeleleka futhi esebenza kahle.
Kwethulwa Izindlela Ezintsha Zokuhlola Nokwabelana Ngemininingwane Namathuba ku-Conductor Searchlight
I-Conductor yethula isethi entsha yezici zepulatifomu yethu yeConductor Searchlight. Ipulatifomu inikeza izindlela ezingenakuqhathaniswa zokuthola ukuthi yini amakhasimende ayifunayo ku-inthanethi ngokusebenzisa idatha yokusesha yamagama angukhiye ehola phambili embonini, amamethrikhi wokuzibandakanya kwezenhlalo zesikhathi sangempela, namathuluzi angenamthungo wokwenza okuqukethwe okubalulekile okunikeza izimpendulo nokwakha ukwethembana namakhasimende.
Ithuluzi le-SEO eliqhutshwa kakhulu yiConductor, i-Explorer, isitolo esisodwa sokucwaninga ngenhloso yamakhasimende, izihloko zokusesha, amagama asemqoka, imizwa yezithameli, ukuqonda kwabantu kanye nokuhlakanipha okuncintisanayo. Ngokuveza izihloko zokuqukethwe okufuneka kakhulu, i-Explorer ikunikeza ukuqonda okungcono kwezithameli zakho eziqondiwe: ukuthi zifunani namuhla, nokuthi zizobe zifunani kusasa. Kuningi okufanele ukhiphe lapha, ngakho-ke uConductor uhlomisa i-Explorer ngazo zonke izici ezintsha eziqhubeka nokulawula isipiliyoni.
I-Explorer ibeka abathengisi esihlalweni somshayeli ngezihlungi ezintsha ezenziwe zaba ngezakho nezingabiwa ukuze kube nokuhlangenwe nakho okwenziwe ngezifiso, ukusesha kanye nezimpawu zomphakathi ezikhanyisa izidingo zamakhasimende kanye nokwaziswa kokuqukethwe okuku-platform okuguqula ukuqonda, kube yithuba, kube okuqukethwe.
Izihlungi ezenziwe zaba ngezakho nezabekayo: Idatha ibaluleke kakhulu njengamandla akho okuhlaziya nge-lens yebhizinisi lakho. Ngolwazi olusha sha lokusebenzisana, ungakha futhi ulondoloze amasethi esihlungi sangokwezifiso ukuze uwasebenzise kaninginingi, futhi wabe nezihlungi kulo lonke iqembu lakho.
Izimpawu Zomphakathi ZONKE Amagama Angukhiye: Ukufunda ukuthi ikhasimende lifunani kuyingxenye yesithombe kuphela. Ukuze uqonde ngokweqiniso ukufunwa kwamakhasimende, udinga ukwazi ukuthi basesha nini nokuthi kungani. Ukuzibandakanya komphakathi kungakusiza ukuthi ulungiselele ikhalenda lokuqukethwe elilungiselelwe ngaphambi kwesikhathi.
Qalisa Isu Lakho Lokuqukethwe ngeziFinyezo Zokuqukethwe Ezandisiwe: Izifinyezo zinika amandla abathengisi ukuthi benze izinqumo ezingcono futhi bafinyelele izethameli ezihlosiwe ngolwazi olubalulekile. Ukufingqwa Kokuqukethwe Kwabaqhubi kuyakhula, kukunikeze ukuguquguquka okwengeziwe ukudala imibhalo enothise ukuqonda esikalini ku-Explorer yonkana.
Ukuqonda okuhle kakhulu kubaluleke kakhulu njengokwazi kwakho ukudala okuqukethwe okunenjongo futhi wabelane ngomthelela. I-Conductor Searchlight manje inikeza izindlela ezilula kakhulu zokulandela, ukukala nokwabelana ngomthelela wokumaketha namaqembu nababambiqhaza, ukuze nonke nithole - futhi nihlale - ekhasini elifanayo.
Izindawo Zokusebenzela eziyizintandokazi: Dala futhi umake izindawo zokusebenzela ezibalulekile - ama-dashboards wokubika aguquguqukayo, angaphakathi kwesikhulumi - njengezintandokazi zokwabelana okusheshayo nokulula kuwo wonke amaqembu, ngaphakathi kwepulatifomu noma nge-imeyili.
Impendulo Yebhokisi Lempendulo ku-Insight Stream: Amazwibela afakiwe (noma amabhokisi ezimpendulo) amele amathuba omkhiqizo wakho ukuze ubonakale ku-Google. Umqhubi uqinisa indlela yethu ye- impendulo yebhokisi lokukhalipha ku-Insight Stream, izindaba zethu zokumaketha ezingaphakathi kwepulatifomu. Hlala phezu kwezinguquko kubunikazi bebhokisi lakho lempendulo, ukuze ungalahlekelwa ukuqonda noma ithuba lokuthola ingcebo ku-Google.
Imininingwane egcwele ngokweqile ayiyona nje inkinga kubathengi; kuyinkinga yamaqembu wokumaketha edijithali nawo. Umsebenzi kaConductor ukwenza ukumaketha okwenziwe ngabantu futhi sikholwa ukuthi indlela yokwenza lokho ukuqonda izidingo zamakhasimende nokunikeza inani kulabo abafuna izimpendulo online. Isethi yeConductor yemikhiqizo ye-SEO iletha ukuqonda okunothile kumakhasimende wanoma iluphi uhlobo, kunoma iyiphi imboni futhi inika amandla abathengisi ukuthi bathathe izinyathelo.
USeth Besmertnik, Isikhulu Esiphezulu seConductor & Co-Founder
Hlela iDemo yoMqhubi
Tags: Umqhubiumqhubi wamazweIpulatifomu yokuSesha yokuKhanyaizifinyezo zokuqukethweukumaketha okuphilayoplatformUSeth Besmertnikamagama angukhiye omphakathi
U-AJ uyiMenenja ePhakeme yokuMaketha koMkhiqizo ku- Conductor. Ukufakelwa okuvela ezweni le-ad agency, i-AJ ingusomaqhinga onolwazi wokukhangisa onentshisekelo yokuvula nokwenza kusebenze ukuqonda kwabathengi.
Ukumelwa Okulula: Ithuluzi Lokumela Lamahhala Lemidiya Yezenhlalo